३ थुनुवा फरार प्रकरण : हिरासतको ग्रिल काट्न अदालतमै कसले थमायो ह्याक्सो ब्लेड?
नारायण अधिकारी बिहीबार, असार २६, २०७६, १८:५७
काठमाडौं- गत सोमबार राती महानगरीय प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीको हिरासतबाट तीन जना कैदी फरार भए। बिहान ड्युटीमा रहेका प्रहरीले जब थुनुवाको गणना गरे, त्यसपछि मात्रै ३ थुनुवा फरार भएको प्रहरीले थाहा पायो।
प्रभागको नेतृत्व गरेका इन्सपेक्टर किरण मल्ल तीनछक्क परे, जब हिरासत कक्षमा रहेको ट्वाइलेटको ग्रिल नै काटिएको थियो। हिरासतकै ग्रिल कसरी काटियो? त्यत्रो ग्रिल काटुन्जेल प्रहरीले किन केही पनि थाहा पाएन? प्रश्न गम्भीर थियो। त्योभन्दा पहिला प्रहरीलाई चुनौती थियो, फरार तीन थुनुवा पक्राउ गर्न।
हिरासतबाट फरार भएका थिए विकास र रुपेश भनिने रामेछाप नगरपालिका-५ का २५ वर्षीय रुद्रलाल श्रेष्ठ, सोही ठाउँका २५ वर्षीय समशेर माझी र रवीकुमार तिमल्सिना।
श्रेष्ठ र माझी चोरी र डाका मुद्दामा पक्राउ परेका थिए भने तिमल्सिना लागुऔषध मुद्दामा। फरारमध्ये श्रेष्ठ र माझीलाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको प्रहरी टोलीले बौद्धको जम्बुडाँडाबाट बुधबार पक्राउ गरिसकेको छ। अर्का एक जना भने अझै फरार छन्। उनीहरु पक्राउ परेसँगै हिरासतको ग्रिल काट्नुको रहस्य बाहिरएको छ।
कसरी काटियो हिरासतको ग्रिल?
खोटाङको सितापोखरी गाउँपालिका-५ मूलडाँडा घर भई बौद्ध टुसाल बस्ने २५ वर्षीय पासाङ शेर्पा र ओखलढुंगाको चम्पादेव गाउँपालिका-७ घर भई सिनामंगल बस्ने २५ वर्षीय सुनील मगर चोरी आरोपमा पक्राउ परेका श्रेष्ठ र माझीका साथी हुन्।
पासाङ सिनामंगलमा किराना पसल सञ्चालन गरेर बसेका छन् भने सुनील कुकुको काम गर्छन्। उनीहरु पटकपटक श्रेष्ठ र माझीलाई भेट्न हिरासत गइरहन्थे। सोही बेला बनिसकेको थियो हिरासतबाट भाग्ने योजना।
असार २३ गते बयानका लागि श्रेष्ठ र माझीलाई जिल्ला अदालत ललितपुर लगिँदै थियो। यसबारे सुनील जानकार थिए। पूर्वयोजना अनुसार उनीहरूलाई अदालत लैजाने दिन असार २३ गते अदालत गए।
पूर्व योजनाअनुसार नै सुनीलले जिल्ला अदालत ललितपुरको ट्वाइलेटमा लगेर ह्याक्सो ब्लेड राखे। उक्त कुराको जानकारी गराइसकेपछि बयानका लागि अदालत पुगेका श्रेष्ठ ट्वाइलेट लाग्यो भन्दै अदालतको ट्वाइलेट प्रवेश गर्छन्। सुनीलले ट्वाइलेटमा राखेको ह्याक्सो ब्लेड कम्मरमा लुकाउँछन्। अदालतको काम सकिएपछि उनीहरु प्रहरी हिरासतमा फर्कन्छन्।
सुनील पनि आफ्नो काम फत्ते भएपछि आफ्नो बाटो लाग्छन्।
यसबारे माझी र श्रेष्ठले हिरासतमै रहेका तिमल्सिनालाई पनि जानकारी गराउँछन्। तीनै जना मिलेर ट्वाइलेटको ग्रिल काटेर भाग्न तयार हुन्छन्। २३ गते राति १ बजेसम्म हिरासतमै केही थुनुवा पोर्ट खलेर बस्छन्।
माझी, श्रेष्ठ र तिमल्सिना भने पालैपालो ट्वाइलेट लाग्यो भन्दै छिर्छन् र पालैपालो ह्याक्सोले ग्रिल काट्छन्। राति १ बजे उनीहरू ग्रिल काटेर हिरासतबाट फरार हुन्छन्।
यसरी पक्राउ परे श्रेष्ठ र माझी
श्रेष्ठ विवाहित हुन्। तरपनि उनका २ जना प्रेमिका छन्। हिरासतबाट भागेपछि श्रेष्ठ प्रेमिकाको कोठमा माझीलाई लिएर राति नै पुग्छन्। प्रेमिकाको मोबाइल नम्बरबाट उनले आफ्नी श्रीमतीलाई फोन गर्दै भनेको कुरा अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीले सुनाए, ‘म हिरासतबाट भागेर आएको छु। प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ। खर्च छैन होला। तेरो सुन बेचेर मलाई पैसा पठा है।’ त्यसपछि श्रेष्ठ र माझी पासाङको कोठामा पुगेर कपडा फेरी निस्कन्छन्।
हिरासतबाट फरार भएको जानकारी पाउनासाथ प्रहरीले उनीहरूका आफ्न्तबारे जानकारी राखिसकेको थियो। सोही अनुसार बिहानै प्रहरी श्रेष्ठको श्रीमतीको कोठामा पुगेको थियो।
श्रेष्ठले प्रेमिकाको नम्बरबाट श्रीमतीलाई फोन गरेर त्यही मोबाइल बोकेर हिँडेका थिए। श्रेष्ठको श्रीमतीलाई आएको कल प्रहरीलाई महत्वपूर्ण क्लु बनेको थियो। उक्त मोबाइल नै श्रेष्ठले लिएर हिँडेको थाहा पाइसकेपछि प्रहरीले मोबाइलको लोकशनकै आधारमा श्रेष्ठ र माझीलाई बौद्धको जम्बुडाँडाबाट पक्राउ गरेको हो।
उनीहरुले ह्याक्सो ब्लेड ल्याइदिने पासाङ र सुनीलको नाम लिएपछि प्रहरीले उनीहरूलाईसमेत पक्राउ गरेको छ। उनीहरुमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको अपराध महाशाखाका एसएसपी सहकुल थापाले जानकारी दिए।
तिमल्सिना भने हिरासतबाट फरार भएपछि एक्लै कलंकीतर्फ लागेको उनीहरूले बताएका छन्। फरार उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
पक्राउ परेका श्रेष्ठ र माझी एक दर्जनभन्दा बढी चोरी तथा डाका मुद्दामा संलग्न भएको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो समय उनीहरू गत बैशाख १५ गते ललितपुर गोदावरीको छम्पीस्थित केशव थापाको घरमा चोरी, जेठ २८ गते राती लगनखेल बसपार्कको स्पिड सर्भिस प्रालिमा भएको चोरीमा समेत संलग्न भएको पाइएको छ।
थुनुवा भागेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले एसपी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले त्यस रात ड्युटीमा रहेका प्रहरी र ड्युटी अफिसरसहित ३ जनालाई निलम्बनसमेत गरेको छ।